20CrMnTi High Speed ​​C / SL China Manufacturer
Home > Products > Tool Holders > BT Fitaovana tompona MAS403 > 20CrMnTi High Speed ​​C / SL
Toro-làlana havanana tsara tarehimarika mivantana ho an'ny tombo-kase ho an'ny tombo-kase ho an'ny tombo-kase Ny sda fonosam-pamokarana lalina dia ny fihenam-bidy avo lenta, tsy ilaina ny fanatobatahana, mora ny fametrahana azy, ny tsiran-tsofa makotroka, mora sy azo ampiasaina, dia karazana fitaovam-pamokarana bitika vaovao ambany.
Toro-lavaka fanitarana boribory, fantatra ihany koa amin'ny vondron-tsatoka madinika,
Izy io dia ampiasaina matetika mba hanitarana ny fikarakarana lavaka fanarenana fitaovana.
Ny lalana an-jatony teo amin'ny sisin'ny miaramila,
Ny sela fanamafisana ny 20crmnti, aorian'ny fikarakarana karazana, ny fahasamihafana eo ambony dia afaka hahatratra 55-58HRC.
Ny vokatra dia miaritra -180 ° ny fitsaboana kioogène, ary ny fitsaboana amin'ny fahanterana maharitra, ny rafitra fitaovana dia matanjaka kokoa.
Ny tsy fahatomombanana sy ny fahamarinan'ny fitaovana dia azo antoka.
Ny fitongilanana eo amin'ny lavaka anatiny sy ny faribolana ivelany dia ≤0.008mm ary vita ny fitaratra.
Ny vokatra dia nanamarina tamina fitaovana iray mandanjalanja, ary mety hahatratra 20,000 rpm ny fampiasana haingana.
Fiakarana madinidinika haingam-pandeha haingam-pandeha 20CrMnTi C / SL Small Shank Holders Mpanamboatra fitaovana haingam-pandeha haingana Hatsikana haingam-pandeha Fifandimbiasam-pandaharam Fitaovana fanodinana fitaovam-piadiana Fiovana haingana GT24 tapaingina
Fiakarana madinidinika haingam-pandeha haingam-pandeha
Mpanamboatra fitaovana haingam-pandeha haingana
Fitaovana fanodinana fitaovam-piadiana
Fiovana haingana GT24 tapaingina